မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): September 2009
ကျနော်တို့ မှာ ဗွီဒီယိုမပါသွားတဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို မဖေါ်ပြနိင်တာခွင့်လွတ်ပါ။ ဗွီအိုအေက တည်းဖြတ်ပြီးသလောက်ပဲ တင်ပြနိင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြရဲဘော်တွေ က သိန်းစိန် နဲ့ညဏ်ဝင်းကိုစောစောစီးစီး အမျှဝေသံ၊ ဖိနိပ်တွေ နဲ့ ဝိုင်းပေါက် ကြတဲ့ပုံတွေ တစိတ်တဒေသ်နဲ့ကျေနပ်ပါဦး နော်။ ဆက်လာဦးမှာပါ။ ဒီထက်ကောင်းတာတွေနဲ့ ပေါက်ဖို့ လည်းအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါအစ ပဲရှိပါသေးတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 10:15 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 9:53 PM0comments
တနင်္လာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် 23 နာရီ 57 မိနစ်
၆၄ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လာသူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့အား သူတို့ တည်းခိုနေသော နယူးယောက်မြို့ရှိ East Gate Hotel ရှေ့တွင် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူ ၃၀ ခန့်က ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ၂ နှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြပွဲ တရပ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့လယ်ရှိ ဂျန်တားမန်းတား အရပ်၌ မြန်မာ...
၅၀၀၀ တန်ထက် ငွေအကြွေကို ပိုမိုလိုလား
Posted by Sanghaalliance at 1:59 AM0comments
အရှင်ဆန္ဒာဓိက ႟ိုက်နှက်ဒဏ်ကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသရမည့် အခြေအနေ ရောက်
Posted by Sanghaalliance at 1:16 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:14 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:05 AM0comments
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ခန်းမကြီးမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမည်
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအပေါ် တည်ပြီး NLD ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မ၀င်ဆုံးဖြတ်မည်
Posted by Sanghaalliance at 1:03 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 12:59 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 12:36 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 6:11 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:35 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 3:30 AM0comments
ရင်ထဲမှာ “သစ်” နေဆဲပါ။
ထလော့.... မြန်မာ၊ အို... မြန်မာတို့
ထာဝရအမှန်ကို၊ ခံယူချက်နဲ့ ယုံကြည်
ရေးသားသူ။ ။ ပန်းသုခ ၁၈.၉.၀၉
(ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၂) နှစ်ပြည့် အထိန်းအမှတ်)
Posted by Sanghaalliance at 3:10 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 3:00 AM0comments
2nd SR Invite
Posted by Sanghaalliance at 12:32 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:38 AM0comments
သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြု ဆုတောင်းရခြင်း (သို့) ထိရောက်အောင် ဆုတောင်းမှုပြုပုံ
Posted by Sanghaalliance at 1:23 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 12:10 PM0comments
ကျနော် အောင်လင်းထွဋ်ပါ၊ အကိုကြီး တပ်မ ၆၆ နည်းဗျူဟာမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကရင်ပြည်နယ်ကို စစ်ဆင်ရေးမသွားခင် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွန်ကြားရေးမှုးရုံး တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေးဌာနမှာ လာရောက်သြ၀ါဒခံယူစဉ် စစ်ဦးစီးမှုးဒုတိယတန်း ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ်ရဲ့ Ray Ban ကိုသတိရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောင် အကိုကြီးတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၁) သင်တန်းမှာ ကျနော် ထောက်လှမ်းရေးဘာသာရပ် lecture လာပို့တာကိုလည်း အမှတ်ရမိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အရေးယူခံရပြီးနောက် အကိုကြီးပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာရော၊ မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ တပ်မတော်သားတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရော အခုအချိန်ထိ စွဲကျန်နေခဲ့သလို …အားလုံးကလဲ အကိုကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို အာဏာရှင်စနစ်ထဲက ကယ်တင်မဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်မိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်သိရသလောက် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများကလည်း အက်ိုကြီးသာဦးဆောင်မယ်ဆိုရင် ထောက်ခံဖို့အသင့်လို့ပဲလို့သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေက်ိုစိတ်ပျက်နေကြပါတယ်ဆိုတာ အားလုံးကပြောနေကြပါတယ်။ အကိုကြီးဟာ ကျနော်တို့ထက် နိုင်ငံအခြေအနေကို အသိဆုံးဖြစ်သလို ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အကြောင်းကိုလည်း အသိဆုံးပါ။ တပ်မတော်သားများအပါအ၀င် ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာကသိအောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ကိုဖြုတ်ချပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လက်တွဲ၍ နိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးက သာဓုခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာရော ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။ ရွှေမြန်မာတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ကျွန်ဖြစ်နေသလို ပြည်တွင်းကမြန်မာတွေလဲ အာဏာပိုင်တွေနှိပ်စက်ချင်တိုင်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ စစ်ကျွန်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အကိုကြီးအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ ဘာတွေဖြစ်ပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ အကိုကြီးအသိဆုံးပါ။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းရဲ့ တရားခံဟာ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေဆိုတာ အကိုကြီးသိပါတယ်။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖျောင်းဖျခိုင်းတာလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီးတင်လှိုင် ဒုတိယတပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနကြီးမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ်သန်းထွန်းတို့ကို အဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့NLD ကိုဆွေးနွေးခိုင်းတာလဲ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေပါပဲ။ အဲဒီဆွေးနွေးလို့ကရလာတဲ့ ရလဒ်ကို ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကိုယ်တိုင်သဘောတူပြီးမှ ဖျက်ပစ်တာလဲ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ကုိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကိုကြီးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကဘာတွေ သဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတာ သိအောင်ထပ်ပြီးပြောပြရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးကိုလွှတ်ပေးမယ် NLD အမျိုးသာညီလာခံပြန်တက်မယ် အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ အခြေခံမှုတွေထဲကအချို့အချက်အလက်တွေပြန်ဆွေးနွေးမယ် ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို တနည်းနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေပါပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်တွေကို ပထမ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက သဘောတူတယ်ဆိုလို့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့တွေ ၉၅% တော့သေချာတယ်ဆိုပြီး ၀မ်းသာမိခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသားညီလာခံစဖို့ နီးပြီဆိုမှ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ စိတ်ပြောင်းပြီး စေ့စပ်ညှိနိုင်းရေးအဖွဲ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးကို ပြန်လွှတ်မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောခိုင်းတယ်။ ဒီစေ့စပ်ညှိနိုင်းရေးအဖွဲ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လယ်သတင်းပို့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်တို့ယောက်ျားတွေလုပ်နေပြီး ကတိမတည်တဲ့လူတွေလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာ အကိုကြီးသိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာက အမျိုးသ္မီးတစ်ယောက်ကို ဒီပဲယင်းမှာ အပြတ်ရှင်းဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်၊ လွတ်လာပြီးတော့လဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့လိမ်ညာပြီးလုံခြုံရေးအရ ထိန်းရပါတယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကို ဗြောင်လိမ်ခိုင်းတယ် နိုင်ငံတကာရဲ့လေသံရော့သွားမှ ပုဒ်မ ၁၀/ခ ဆိုပြီး လူမသိ သူမသိ ချုပ်တယ်၊ ၅နှစ်ပြည့်လို့ လွတ်ရက်စေ့တော့လဲ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ပြီး ၆နှစ်လို့ပြောတယ် ၆နှစ်ပြည့်လို လွတ်ချိန်တန်တော့ USA က်Mr. Yattaw နဲ့ အကွက်ဆင်ပြီးဖမ်းတယ် ဒါတွေက်ို ပြန်လေ့လာရင် အကိုကြီးပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသေးရဲ့လား။ ၂၀၀၉ ခု ဂျွန်လအတွင်းမှာ တရားသူကြီးချုပ် ဦးအောင်တိုး နေပြည်တော်က ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာ အဖိုးကြီးရဲ့ Pressure လို့ မခံနိုင်လို့ ဘူးသီးလုပ်ခံရလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ တရားသူကြီချုပ်ဆိုတာ ဥပဒေကို ထိန်းရမဲ့ အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ပါ။ တရားသူကြီးချုပ်က ထိန်းချင်ပေမဲ့ ဥပဒေထက်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးကထင်ရာစိုင်းပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာ ဥပဒေ ထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့လား။ အကိုကြီးခင်ဗျား.. အကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ မှန်ကန်မြင့်မြတ်တဲ့စကားကို တည်စေချင်ရင် အကိုကြီးကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကို ဖယ်ရှားဖို့ပါပဲ။ အဲဒီနောက်မှာ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေတဲ့ အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါ။
၁ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများပြန်လွတ်ပေးရေး
၂ ။ နိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး
၃ ။ အများသဘောတူတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အတူ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အကိုကြီး ခင်ဗျာ. ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံကို အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ရဲ့လက်တွင်းကကယ်တင်ဖို့ အကိုကြီးဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ( Psychic reflection ) ဆိုက်ကစ် ရီဖလေးရှင်းဖြစ်နေတဲ့ စိတ္တဇဝေဒနာသည်ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးကို အနားပေးဖို့အချိန်တန်နေပါပြီးခင်ဗျာ. နတ်လူသာဓုခေါ်ဖို့ ကျနော်တို့စောင့်နေကြပါတယ်။
Posted by Sanghaalliance at 4:09 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:00 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 8:24 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:04 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:50 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:39 AM0comments
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိနေကြောင်း ၎င်းပါတီနှင့် နီးစပ်သော
စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ကိုးကန့်ဒေသ တည်ငြိမ်လာ သောကြောင့် ဒေသခံများ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသည်ဟု ဖော်ပြနေသော်လည်း ၀ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ရာ ပန်ဆန်းတွင်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ သံဃာတော်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာပိုင်များက ဘုရားကျောင်းကန် အစရှိ သည့် သာသနာ့နယ်မြေ များတွင်ပါ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ ဟန်ဆောင်၍
မြန်မာပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော တိုင်းရင်းဆေးဝါး အမှတ်တံဆိပ် ၁၄ မျိုးနှင့် ငရုတ်ဆီ အမျိုးအစား ၁၀ မျိုးကို သုံးစွဲရန် မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့
ဦးရွှေအုန်းနှင့် တတိယအင်အားစု မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမည်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ဝါရင့်ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုန်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၌ တတိယအင်အားစုအဖြစ် လှုပ်ရှားနေသူတစုနှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွား...
အမျိုးသမီး ၂၀ ခန့်၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခိုးရိုက်ကူးခဲ့သူဟု စွပ်စွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် သီတင်းပတ် ၁၂...
မြန်မာ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့် တူရကီ အထည်အလိပ်အုပ်စု တီးမားတို့ ဒေါ်လာ ၆ သန်းခွဲတန် စီမံကိန်းတခုအတွက် ရန်ကုန်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကာ......
စစ်အစိုးရ၏ `သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှု´ အကြောင်း အတော်လေးပြောကြသည်။ သို့သော် မျက်စိလျှမ်းနေကြသည်မှာ ဤအခြေအနေများကို စစ်အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကွဲအပြဲများကို...
Posted by Sanghaalliance at 1:28 AM0comments
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ပြန်လည်ကြားနာဖို့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေကျိုးဆောင်တွေက လျှောက်လဲချက် တင်ထားတာကို ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကြားရှင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးသတင်း နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖော်ပြ
Posted by Sanghaalliance at 1:24 AM0comments